Puzzle biby biby, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Andro vitsivitsy sisa tavela mandra-pahatongan'ny fialantsasatry ny Krismasy ary mandritra an'ity volana ity dia nasehonay anao ny fampiharana sy lalao samihafa mba hahafahan'ny ankizy kely ao an-trano manana fotoana mahafinaritra mandritra ny fianarany (sy amin'ny fomba avelany mangina kely fotsiny izahay ). Amin'ity indray mitoraka ity isika dia miresaka lalao lalao ankamantatra izay azontsika atao ny miovaova ny sarotra, ka sady tsy mora no tsy sarotra ny mamaha azy ireo. Ny piozila biby any an-tsaha dia mifantoka amin'ny hetsika izay atao matetika amin'ny toeram-piompiana, hetsika atao amin'ny endrika piozila ka ny kely indrindra hatramin'ny dimy taona dia mianatra ny asa izay tanterahina ao.
Anisan'ireo lohahevitra samihafa amin'ny ankamantatra Izay ho hitantsika ao amin'ny Puzzle Animals Farm dia hitantsika ilay manangona voankazo, mandrehitra afo, mahita harena very, mijinja legioma ao an-jaridaina, mitrandraka ao am-bala ary manary, trondro ao anaty dobo, manampy ireo biby hiampita tetezana iray, maka paoma avy amin'ny tanimboly, manidina amin'ny fiaramanidina famafazana na milalao an-trano miaraka amin'ny granny.
Endri-javatra ny Puzzle Animal Farm
Puzzles amin'ny sokajin-taona rehetra, ahafahantsika manamboatra ny isan'ny sombin-javatra.
Ireo biby ao anaty piozila dia velona indray rehefa voavaha ilay piozila.
Miovaova ny sary mihetsika isaky ny averina.
Mozika sy feo manintona be.
Ity fampiharana ity dia natao ho an'ny ankizy akaninjaza, preschool ary sekoly fanabeazana fototra, izay hanombohany mampivelatra fahaiza-manao hamahana olana tsotra. Farm Animal Puzzle dia mitaky ny iOS 6.0 na taty aoriana, mifanaraka amin'ny lahasa Fizarana Fianakaviana ary azo atao ankafizin'ny iPhone, iPad ary iPod touch. Ity lalao ity dia ambany noho ny 70 MB fotsiny eo amin'ny fitaovantsika sy Amin'ny teny anglisy ihany izy io, fa ny menus dia tena intuitive ary tsy mila fandikan-teny raha tsy manana fahalalana momba an'io fiteny io ianao.
Puzzles biby fiompy ho an'ny ankizy€ 4,49
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Puzzles biby fiompy, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra